15 | avril | 2020 | InfoKmada
Paska sy Alatsinain’ny Paska: miisa 92 ireo niditra teny amin’ny HJRA
InfoKmada - 15 avril 2020 0
Nihena 50% ny isan’ireo marary niditra teny amin’ny hopitaly joseph ravoahangy andrianavalona ny andron’ny Paska sy ny Alatsinain’ny Paska raha ampitahaina ny tamin’ny taona 2019. Ireo tranga eny amin’ny fiarahamonina na ny accident à responsabilité civile vokatry ny fhibohona no betsaka raha ny antontanisa voaray.
Mpitandro filaminana : manohy ny fanabeazana ny olom-pirenena
Manohy ny fanabeazana ny olom-pirenena ho fisorohana ny fipariahan’ny valan’aretina Covid-19 ny eo anivon’ny mpitandro filaminana. Androany naverin-dalana ireo izay tsy manana takom-bava teny Ampasika, mandeha ny tsena ho an’ireo mpivarotra takom-bava manoloana izany.
Famokarana solika maneran-tany : hihena hatramin’ny 10 Tapitrisa barils isan’andro
Manoloana ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus manerantany izay nisy fiantraikany goavana amin’ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, hihena hatramin’ny 10Tapitrisa barils isan’andro ny famokarana solika manerantany manomboka ny Volana Mai izao . Izay no vokatry ny fifanarahan’ireo firenena mivondrona eo anivon’ny OPEP. Raha ny fanazavan’ny mpahay toekarena, tsy tokony hisy fiantraikany ao anatin’ny fotoana fohy eto Madagasikara izany.
Orinasa JB : mpiasa « journalier » 1 000 natsahatra amin’ny asany
Mitohy hatrany ny fampiatoana mandritra ny fotoana tsy voafaritra ireo mpiasa an-tselika na « journalier » eo anivon’ny orinasa JB Amboditsiry. Manodidina ny 1000 no voakasik’izany anatin’izao fiatrehan’ny firenena ny Covid-19 izao. Velon-taraina manoloana io ireo mpiasa ary mangataka ny fijerena ny momba azy ireo.
Mpiasan’ ny fahasalamana : tsy ampy ny « Equipement et protection »
Tsy ampy ary tsy manaraka ny fenitra iarovan’izy ireo ny tenanay ny « Equipement et protection » eo am-pelatanana amin’ny fikarakara ireo mararin’ny Coronavirus hoy ny filohan’ny Syndicat des Infirmier et des Sage-Femmes de Madagascar androany. Antso avo no ataon’izy ireo amin’ny mpitondra mba hijerevam-baha-olana mahakasika izany.
Fanarenana ara-toekarena : nanendry olona 04 ny Vondrona Afrikana
Ho fiatrehana ny fanarenana ara-toekarena aty Afrika aorian’ny fandalovan’ny COVID 19, nanendry olona 04 ny Vondrona Afrikana. Ireo olona 04 ireo no hanetsika ireo fanohanana haingana sy azo tsapain-tanana araka ny nampanantenain’ny G20 sy ny Vondrona Eropeana ary ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena isan-tokony.